Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: November 2008
By Siri Mon Chan November 26, 2008
(1) an extension of visa ban on officials of the SPDC (the State Peace and Development Council) and the USDA( the Union Solidarity and Development Association),
(2)afreeze on the US assets of Burmese officials,
(3) ban on financial transactions between American parties and “entities of Rangoon Regime”,
(4) an embargo on all imports from Burma to the US.
(This paper was presented ataseminar on Asia-Pacific Security at the Australian Defence Force Academy)
Seekins, D.M. (2005). ‘Burma and U.S. Sanctions: Punishing an Authoritarian Regime’, Asian Survey, vol.55, no.3, pp.437-452.
Seekins, D.M.(1997). ‘Burma-China Relations: Playing with Fire’, Asian Survey, vol.37, no.6, pp.525-539.
Taylor, R.H. (1991). ‘Myanmar 1990: New Era or Old?’, Southeast Asian Affairs, vol.18, pp.199-218.
Yawnghe, C.T.(1995). ‘The Depoliticization of the Political’, in Muthiah Alagappa (ed), Political Legitimacy in Southeast Asia: The Quest for Moral Authority, Stanford University Press, Stanford.
်သိမ်းခံရခြင်းနှင့်ပါတီအဖွဲ.ဝင်များနိုင်ငံရေးလုပ်ပိုင်ခွင်.တားမြစ်ခံရခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်၊ထို.အပြင်၊ဘုရင်စနစ် နှင့်ဘုရင်၏အတိုင်ပင်ခံအမတ်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင်.အာဏာကိုကျယ်ပြန်.စွာတိုးချဲ.ထားပါသည်၊အကယ်၍ယင်ဥပဒေကိုအထက် လွှတ်တော်နှင့်အောက်လွှတ်တော်အမတ်များ၏မဲအများစုဖြင့်ပြင်ဆင်ခွင့်ရရင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင်ထိုင်းနိုင်ငံပြန်လာနိုင်ခြင်း နှင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ပိုင်ခွင်.ပိတ်ပင်ခံထားရသောသူ၏ပါတီဝင်များကိုနိုင်ငံ ရေးပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင်.ရခြင်း၏အကျိုးများသက်ရောက်မှာဖြစ်ပါသည်၊ထို.ကြောင့်၊ ယင်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုလုံးဝမပြုလုပ်နိုင် ရေးအတွက်ပီအေဒီအဖွဲ.ဦးဆောင်ပြီးဆန်.ကျင်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါသည်၊
ထိုင်းလွှတ်တော်ရုံကိုပိအေဒီအဖွဲ.တွေပိတ်ပင်ထားသဖြင့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်၊နောက်တစ်ခါ၊ ဒွန်မိန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင်ယာယီအစိုးရဂေဟာစိုက်ထားသောနေရာမှာလွှတ်တော်များအစည်းအဝေးလုပ်ရန် ကြိုးစားသေးသည်၊ပီအေဒီအဖွဲ.ကသတင်းရလျှင်ရချင်း သွားရောက်ပိတ်ပင်လိုက်ပြန်သည်၊နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်က၊ထိုင်းစစ် တပ်ဗဟိုဌနချုပ်မှာလွှတ်တော်အမတ်များအစည်းအဝေးလုပ်ရန်ကြိုးစားပြန်သော်လည်းပီအေဒီအဖွ.ဲတွေသွားရောက်ပိတ်ပင် ထားပြန်သဖြင့်အစည်းအဝေးကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းလိုက်ရပြန်သည်၊ပီအေဒီအဖွဲ.၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအစိုးရလိုလာသောအင်္ကျီ အနီးအုပ်စုကနှောက်ယှက်ခြင်း၊ခဲနဲ.ပေါက်ခြင်း၊တုတ်နဲ.ရိုက်ခြင်း၊လက်နက်၊လက်ပစ်ဗုံများနဲ.တိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်၊
ပီအေဒီဦးဆောင်သောလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဆွန်းချိုင်းဝေါင်စဝွပ်နှုတ်ထွက်ရေး၊ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ဆန်.ကျင်ရေးနှင့်နိုင်ငံရေးစန စ်သစ်တစ်ခုဖန်းတီးရေးလှုပ်ရှားမှုများအရှိန်ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှားဝန်ကြီးချုပ်ဆွန်းချိုင်းကပဲရူနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်နေသောအေပက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေပါသည်၊တစ်ချိန်တည်မှာပင်၊ဒီနေ.ဗုဒ္ဓဟူးနေ.၊အချိန်(၁)နာရီလောက်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်ကသုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်မှာပြန်လာဆင်းရောက်မယ်လို.သတင်းရှရှိထားသဖြင့်သောင်းနဲချီးသောပီအေဒီအဖွဲ.တွေက
ထိုကဲ့သို.ပိတ်ပင်ထားသည်ကိုမကျေနပ်သောအစိုးရလိုလာသူများကဗုံနဲ.ပစ်ခဲ့ရာဆက်တိုက်ဗုံလေလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါသည်၊ဒဏ်ရာရ ရရှိသူပေါင်း(၁၆)ယောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါသည်၊သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်၏ထွက်ပေါက်အားလုံးကိုပီအေဒီအဖွဲ.များပိတ်ပင်ထားသ ဖြင့်လေယာဉ်များပျံသန်းဆင်းရောက်မှုများကိုလည်လုံးဝရပ်စဲလိုက်ရပြီးဖြစ်ပါသည်၊ပီအေဒီအဖွဲ.အနေနဲ.ဝန်ကြီးချုပ်ဆွန်းချိုင်း နှုတ်မထွက်မချင်းလေဆိပ်ကနေထွက်ခွာမယ်မဟုတ်ဘူးလို.ကြေညာထားပါသည်၊အစိုး၇လိုလာသူများနဲ.ထောက်ခံသူများအ ကြားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများမဖြစ်ပွားရန်ထိုင်းရဲနှင့်စစ်တပ်များကအနီးကပ်စောင့်နေပါသည်၊
ထိုင်းစစ်တပ်ကဘက်မလိုက်ရပ်တည်သွားမယ်လို.ပြောဆိုနေပေမဲ့အစိုးရဘက်မှာရပ်တည်နေပါသည်၊ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ.အများစုက အစိုးရဘက်မှာလုံးဝရပ်တည်နေဆဲပါ၊ဒါပေမဲ့၊အလတ်တန်းလူတန်းစာထိုင်းပြည်သူလူထုနဲ.ထိုင်းလေတပ်ဖွဲ.တို.ကပီအေဒီအဖွဲ. ကိုထောက်ခံနေပါသည်၊ဒါပေမဲ.၊ထိုင်းစစ်တပ်နဲ.ရဲတပ်ဖွဲ.တွေကအကြမ်းဖက်မှုလုပ်လာမယ့်လက္ခဏာလုံးဝမတွေ.သေးပါ၊ အောက်တိုဘာလ(၇)ရက်နေ.တုန်းကထိုင်းရဲတွေအကြမ်းဖက်နှိမ်းနင်းမှုကိုလူနှစ်ယောက်သေးဆုံးပြီး၄၀၀ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ သဖြင့်ထိုင်းမိဘုရားအပါအဝင်ထိုင်းပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်တဲ့ရှတ်ချအော်သံများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်၊
AOT also has providedahotline number for inquiries: 02-1321882 and 02-1321888. However, an AOT official said the lines soon became jammed.
For THAI flight information, the following number 02-3561111 has been provided.
Sole Myanmar protester demands activists' release
YANGON, Myanmar (AP) — A lone demonstrator stagedasilent protest in front of detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyi's party headquarters Saturday demanding the military government free all student activists as the country celebrated its National Day.
YANGON, MYANMAR: A court in military-ruled Myanmar has sentenced three ethnic minority activists andawell-known Buddhist monk to prison, continuingacrackdown that began last week with pro-democracy activists.
Meanwhile, five United Nations experts issuedastatement Tuesday (18 Nov) in Geneva strongly condemning the "severe convictions and the unfair trials of prisoners of conscience in Myanmar." At least 70 activists were sentenced to prison terms last week, and another seven on Monday (17 Nov).
"They further demand that all detainees be retried in open hearings respecting fair trial standards and the immediate release of their defense counsels," it said. Three defense lawyers have been sentenced to several months imprisonment for contempt of court, while several others have been barred from representing their clients. (AP)
မင်းထက်အောင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈။ (ကာအိုဝါအိုသတင်းဌာန)
နအဖရဲ့ အဓိကနံပါတ်တစ် ရန်သူကတော့ ပြည်တွင်းမြေပေါ် အတိုက်ခံပါတီ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား ပါတီများနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေပါ ၊ အထူးသဖြင့် ဒီလှုပ်ရှားသူ အင်းအားစုတွေမှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ ခေါင်းဆောင် အများစုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရေး လောကမှာ ရှေ့မီ နောက်မီ အတွေ့အကြုံများ ရှိခဲ့သလို ကမ္ဘာနဲ့မြန်မာပြည် အခြေအနေကို ခေတ်ကာလနဲ့အညီ သိရှိနားလည်ကြတဲ့သူတွေပါ။ ဆိုလိုတာက နိုင်ငံရေးကို နားလည်ကြတဲ့သူတွေပါ။ ပူးပေါင်း ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ လူငယ်စုတွေကိုလည်း စစ်အစိုးရက လျှော့မတွက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဓိက နံပါတ်တစ် ရန်သူနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့သူတွေကို ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ တရားတာ မတရားတာ အပထား၊ နအဖနဲ့ အပေါင်းအပါတွေက ယ္ခု သီတင်းပတ်မှာ မထောက်မညှာ ထောင်ဒဏ်အသီးသီး ချခဲ့ပါပြီ။
တဖက်က အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေဟာ မူလက နအဖရဲ့ ရန်သူနံပါတ်တစ် စာရင်းဝင်ခဲ့ပေမဲ့ သေနတ်တွေကျည် မထိုးထားရတော့တဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် ဟန်ဆောင်ပြီး မိတ်ဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့တော့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေဟာ နံပါတ်တစ်ရန်သူစာရင်းကနေ ခေတ္တ လျှောကျသွားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တဖက်နဲ့တဖက် လုံးဝ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အဆင့်တွေကို မတည်ဆောက်နိုင်ကြသေးပါဘူး။
ဒီတော့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေအပေါ် ဗြောင်ဗြောင်တင်းတင်း လက်ရဲဇက်ရဲ မကိုင်တွယ် မစွက်ဖက်ရဲ သေးတာဟာ အဖွဲ့အစည်းတွေအသီးသီးမှာ လက်နက်ကိုယ်စီ ရှိနေသေးလို့ပါပဲ ၊ ဒါပေမဲ့ နအဖက ဒီအဖွဲ့တွေအပေါ် လုံးဝ လစ်လျှူပြုထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
နအဖ အနေနဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေရဲ့ အခြေအနေကို အမြဲတမ်း လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေရဲ့ လက်ရှိအနေအထား ၊ လက်နက်လူအင်အား၊ ဘဏ္ဍာရေး ရပ်တည်မှုများ၊ ခေါင်းဆောင်များရဲ့ တဦးချင်း ရပ်တည်မှု အခြေအနေ၊ ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်း အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များတွေကို နအဖရဲ့ အောက်ခြေအဖွဲ့များ အမြဲမပြတ် လေ့လာသုံသပ်ပြီး အစီရင်ခံနေကြရပါတယ်။
အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေအပေါ် တိုက်ရိုက် အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေ နအဖ မရရှိသေးပေမဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအရ နအဖကို တည်မှီနေရတဲ့ အချို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် သြဇာညောင်းလာတာ တွေ့ရှိလာရပါတယ်၊ နအဖ စေခိုင်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အချင်းချင်းပဲ ဖြစ်စေ၊ အနီးကပ် မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စေ အသေးစား ပဋိပက္ခမှ အကြီးစားဖြစ်လာအောင် လိုအပ်တဲ့ကာလမှာ နအဖက အသုံးချလာနိုင်ပါတယ်၊ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ သပ်လျှို ဖြိုခွင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သာဓကများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အာဏာလွန်ဆွဲမှု ဖြစ်လာအောင် ခေါင်းဆောင်တချို့ကို မက်လုံးပေး ဖဲ့ထုတ်စည်းရုံးပြီး သီးသန့် အဖွဲ့သစ်တွေ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဖန်တီး၊ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာ ညီညွတ်မှု မရှိနေကြသယောင် သတင်းလွှင့်၊ ပဋိပက္ခတွေ တဖြေးဖြေး ကြီးထွားလာအောင် နအဖ မသိမသာ သွေးထိုး ကြံဆောင်နေတာပါ။ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ကိုပဲ အဓိကထားပြီး ထင်သာမြင်သာ ရှိအောင် တင်ပြခဲ့ပေမဲ့ အပစ်အခတ် မရပ်ရသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း နအဖရဲ့ ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နေမှုတွေဟာ ပုံသဏ္ဍာန်အရ အနည်းငယ် ကွာခြားမှု ရှိပေမဲ့ အနှစ်သာရအားဖြင့် သိပ်ပြီး မကွာခြားလှပါဘူး။
နအဖက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်လို့သာ တကြော်ကြော် အော်နေပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီသစ် ဖွဲ့စည်းခွင့်အတွက် အရိပ်အရောင် မပြသေးပါဘူး၊ သူတို့ပါတီနဲ့ သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံ မဟာမိတ်ပါတီတွေ ဖွဲ့စည်းရေးကို ကြိတ်ပြီး တိတ်တဆိတ် လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်၊ သူတို့အဖွဲ့တွေ အဆင်သင့် ဖြစ်တာနဲ့ ရက်ပိုင်းတိုတိုလေးမှာ နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုမဲ့ပုံ ပေါ်နေပါတယ်၊ ကိုယ်ကျိုးရှာ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့တွေပဲ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်လာဖို့ များပါတယ် ။တကယ်အဓိကကျတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ပါတီကတော့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြမှာ မဟုတ်သလို အသိမှတ်ပြုမှာလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရသစ် ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ဇာတ်ကို ကိုယ်သာကပြီး လက်ခုတ်တီးမဲ့ ပရိသတ် ရှိမှာ မဟုတ်သလို ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရလာဒ်တွေနဲ့ အကောင်အထည် ဖေါ်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ အသက်ဝင်လာမှာ မဟုတ်တာ သေချာနေပါတယ်။
ပြည်သူလူထုနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘော ဆန္ဒမပါ အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ခရီးမြန်းနေရမဲ့ နိုင်ငံတော်သစ် ဆိုတာဟာ နအဖ အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ရှေ့စခန်း ဆက်ရမလဲဆိုတာကို သတိပြုမိဟန် မပေါ်ပဲ ငါ့လှေ ငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်၊ ငါ့မြင်းငါစိုင်း စစ်ကိုင်းရောက်ရောက် လိုဖြစ်နေပါတယ်၊ ၂၁ ရာစု အကြိုရောက် နေပါပြီ၊ ပြည်သူတွေဟာ ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့ခေတ်က လူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ခေတ်စနစ် တွေလဲ ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ နအဖရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာတော့ ၂၁ ရာစုနဲ့အညီ ပြည်သူတွေဆီက ခေါင်းဆောင်မှုကို မခံယူတတ်သေးပါဘူး။
အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လက်နက်ဖြုတ်ရမလဲ ဆိုတာ နအဖအဖို့ ခေါင်းခဲစရာပါ၊ အနှစ်နှစ် အလလက ဘဝ၊ အသက်၊ ချွေး၊ သွေးတွေနဲ့ ရင်းပြီး ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ ဒီလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ပုံမကျ ပန်းမကျ စစ်ဗိုလ်တစ်မတ်သား အစိုးရလက်အောက်မှာ လွယ်လွယ်နဲ့ခေါင်းညိတ်ကြမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို အများလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထား မရှိသရွေ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ အားလုံးကို တစ်နေရာထဲကနေ ထိမ်းချုပ်၊ အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကို မရောက်ရှိနိုင်ပါဘူး၊ ဒီလိုအခြေအနေ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဖြစ်နေတဲ့ ကြားကာလတွေ ရှည်ကြာနေမယ်ဆိုယင် မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ အဖက်ဖက်က ယိုယွင်းလာပြီး ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်လာကာ တကယ့်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကို ဦးတည်နေပါတယ်။ အခုလို ယာယီအားဖြင့် တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ သေနတ်သံတွေကို အနာဂတ်မဲ့ ရေရှည်မှာ ဒီပုံစံအတိုင်း ခရီးဆက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူကြောင်း စောင့်ကြည့်အကဲခတ်နိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
(Welcome Yo!! Bush said to Obama)
In this photo released by The White House President George W. Bush speaks with President-elect Barack Obama duringacongratulatory phone call Tuesday, Nov.4, 2008, from the Treaty Room at the White House. Obama was elected the nation's first black president Tuesday night inahistoric triumph that overcame racial barriers as old as America itself.
"To those who would tear this world down ¿ we will defeat you. To those who seek peace and security ¿ we support you. And to all those who have wondered if America's beacon still burns as bright ¿ tonight we proved once more that the true strength of our nation comes not from our the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals: democracy, liberty, opportunity, and unyielding hope."
(Obama Speech: Acceptance of the 44th President of the United States in Chicago, Nov4, 2008, Tuesday night)
""The American people have spoken, and they have spoken clearly" "Barack Obama was my opponent, but he will be my president" "
(John McCain Concedes: Speech in Phoenix Arizona on Tuesday night Nov4,2008)